Broker Forex tsara indrindra 2022 & fifanakalozana vola crypto
brokers tsara indrindra
Broker azo itokisana indrindra
Brokers ho an'ny vao manomboka
Broker PAMM tsara indrindra
Vidio ny vola crypto
Ny vatsim-pianarana tsara indrindra amin'ny 2022
Vidio BTC amin'ny karatra
Vidio ny BTC Anonymous
Mividiana amin'ny Paypal
Fifanakalozana vao manomboka
Fanondroana tahotra sy fitiavam-bola
ICO teo aloha
Wallets tsara indrindra
Wallet Ethereum tsara indrindra
Wallet Bitcoin tsara indrindra
Wallet Litecoin tsara indrindra
Mitadiava broker tsara indrindra ho anao
Nanolo-tena izahay hitondra ny mpivarotra tsy miangatra hevitra momba ny broker mba hanampiana azy ireo hahita ny tsara indrindra Forex brokers, safidy binary ary fifanakalozana cryptocurrency ho an'ny filan'ny varotra an-tserasera.
Manana hevitra maro momba ny broker izahay, naoty ary fitaovana fampitahana azo ampiasaina hanampiana ireo mpivarotra haingana sy mora hamantatra ireo brokers tsara indrindra ho an'ny filany manokana.
* Mety ho tandindomin-doza ny renivohitra
Ny fampiasam-bola amin'ny safidy Forex, CFD ary FX dia misy risika lehibe amin'ny fatiantoka ary tsy mety amin'ny mpampiasa vola rehetra.
Fametrahana kely indrindra ho an'ny fidirana
Fitaovana fampianarana maro
Jereo izao!Olymp Trade TestJereo izao!Olymp Trade Test
Fananana mihoatra ny 100 hamidy
Sehatra teknolojia avo lenta nahazo loka
Jereo izao!Derive TestJereo izao!Derive Test
Fifantenana lehibe amin'ny fitaovana ara-barotra
Loka iraisam-pirenena isan-karazany
Jereo izao!Fitsapana AvaTradeJereo izao!Fitsapana AvaTrade
Jereo ny broker rehetra
Hevitra broker ho an'ny varotra
Ny ekipanay dia nianatra broker an-jatony ary mitondra anao ny fampahalalana manan-danja indrindra amin'ny famakafakana marim-pototra nefa amin'ny antsipiriany mba hanampiana anao handray fanapahan-kevitra tsara amin'ny fisafidianana ireo mpivarotra varotra tsara indrindra ho an'ny filanao manokana.
Inona no atao hoe mpivarotra varotra?
Ny mpanelanelana ara-barotra dia mpanelanelana ahafahan'ny mpanjifa mividy sy mivarotra fitaovana ara-barotra amin'ny saram-bola kely. Izy ireo dia manome fahafahana miditra amin'ny sehatra ho an'ny mpivarotra sy mpampiasa vola mba hahafahan'izy ireo mivarotra amin'ny tsena isan-karazany toy ny Forex, Stocks, Commodities, Criptomoedas, hoavy, indices, metaly, angovo, Options, Bonds, ETFs, CFDs, sns. izay manolotra fitambarana fitaovana ara-bola.
Ho fanampin'ny fanomezana kaonty sy sehatra ara-barotra, matetika ireo mpivarotra ireo dia manome serivisy brokerage isan-karazany, ao anatin'izany ny fitaovam-pampianarana, ny fitaovana ara-barotra, ny famakafakana ny tsena, ny fampiharana ara-barotra, ny sehatra ara-barotra sosialy, sy ny maro hafa.
Ahoana ny varotra an-tserasera?
Ny varotra an-tserasera dia midika fampiasam-bola amin'ny vokatra ara-bola amin'ny fampiasana sehatra ara-barotra nomen'ny orinasa brokerage izay hanolotra tsena sy fananana isan-karazany.
Rehefa manao varotra an-tserasera ianao, dia mividy (mandeha lava) na mivarotra (manohy fohy) fitaovana ara-bola ary manombatombana raha hiakatra na hidina ny vidiny mba hanandramana hahazo tombony amin'ny hetsika tsena. Ny broker dia miasa ho mpanelanelana eo amin'ny mpivarotra sy ny tsena misy azy ireo.
Mora idirana ny varotra an-tserasera, afaka manokatra kaonty brokerage sy manao varotra an-tserasera amin'ny alàlan'ny desktop, tranonkala ary sehatra ara-barotra elektronika finday ny olona rehetra manana fifandraisana Internet.
Ahoana no fehezin'ny tsena Forex?
Ny tsena Forex dia fehezin'ny lalàna any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Ilaina izany mba hampihenana ny mety hisian'ny hosoka amin'ny ampahany amin'ny broker Forex ary hiarovana ny reniben'ny mpampiasa vola.
Raha te hiditra amin'ny tsenan'ny banky dia mila misoratra anarana ho toy ny fikambanana manolotra tolotra ara-bola ny broker.
Izany hoe, ny fahazoan-dàlana amin'ny broker Forex dia tsy voatery. Saingy ireo mpikirakira izay mikasa ny hiasa amim-pahatsorana dia mitady fahazoan-dàlana, satria manome antoka ny fahatokisana sy fiarovana ny mpampiasa.
Eny tokoa, mba hahazoana fahazoan-dàlana, ny broker dia tsy maintsy manatanteraka fepetra sarotra maro: mandalo fanamarinana araka ny tokony ho izy, mandamina tahiry fanonerana, mitazona tatitra mangarahara, sns. Ny fahazoan-dàlana broker dia mizara ho ambaratonga maromaro.
US Derivatives Exchange Commission (CFTC) sy US National Futures Association (NFA). Ireo no fikambanana mitaky fitakiana indrindra, mifehy ny asan'ny brokers izy ireo, ka ny brokers manana fahazoan-dàlana toy izany no azo antoka indrindra.
Ny Manampahefana ara-bola (FSA) any Angletera sy ny Vaomieran'ny Securities and Investments Australia (ASIC). Eto dia mora kokoa ny fepetra amin'ny famoahana fahazoan-dàlana, saingy amin'ny ankapobeny dia sarotra ny mahazo azy.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sy Malta Financial Services Authority (MFSA). Tsotra kokoa ny tatitra ary malemy kokoa ny fanaraha-maso ankapobeny ho an'ireo fikambanana ireo. Na izany aza, ny fahazoan-dàlana ho azy ireo ihany koa dia omena ho an'ny broker azo itokisana.
Vaomieran'ny serivisy ara-bola ao amin'ny Nosy Virijiny Britanika (FSC BVI) sy ny Vaomieran'ny Sampan-draharaha Ara-bola Iraisam-pirenena Belize (IFSC). Ireo fikambanana ireo dia tsy mitaky broker ao amin'ny biraon'ny solontenany manokana, fa manao fanaraha-maso tsy tapaka.
Ambaratonga fahadimy sy fahenina
Seychelles Financial Services Authority (SFSA) sy Saint Vincent and the Grenadines Islands Financial Regulatory Authority (SVG FSA). Izy ireo dia manasongadina rafitra fahazoan-dàlana notsorina ary ambany fanaraha-maso.
Ireo mpandrindra ireo dia omena ho ohatra; raha ny marina dia mbola betsaka kokoa. Ny safidy tsara indrindra dia ny mifidy broker izay fehezin'ny fikambanana 1 ka hatramin'ny 4 ny hetsika; izy ireo no azo antoka indrindra.
Saingy misy antsipiriany iray hafa. Eo amin'ny sisin-tanin'ny fireneny ihany no manana fahefana ara-dalàna ny mpandrindra. Midika izany fa raha, ohatra, ny mponina ao amin'ny Vondrona Eoropeana miasa ao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia ireo mpandrindra EU ihany no afaka miaro azy ireo.
Inona no atao hoe broker azo itokisana?
Rehefa mifidy broker Forex dia zava-dehibe ny tsy ho lavo amin'ny mpisoloky, ilay antsoina hoe "trano fivarotana siny" na orinasa "tsy misy adiresy".
Mba hanampiana anao hamantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny broker tsy marim-pototra sy azo itokisana, dia nahita famantarana maromaro momba ny broker tsy misy fepetra sy broker azo itokisana izahay:
broker azo itokisana mpisoloky
Ny fampahalalana momba ny orinasa dia manondro ny tombony sy ny tsy fahampiana rehetra; miasa miaraka amin'ireo vao manomboka sy mpivarotra za-draharaha ny broker Aleoko miara-miasa amin'ireo mpivarotra vaovao, fitaovana fampiroboroboana maro ho an'ny vao manomboka
Ny vaomiera sy ny fiparitahana dia voalaza mazava tsara Vaomiera miafina sy fandoavam-bola
Tsy misy slippage na malfunction Olana amin'ny scalping mavitrika, mivaingana ny mpizara, fisintahana matetika
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia mavitrika, ny consultant dia mahay tsara Mangina ny fanohanan'ny mpanjifa, tsy misy fanamboarana haingana azo atao
Ny fanesorana ny vola dia atao haingana Ny valin-kevitry ny mpanjifa dia manana olana amin'ny fisintonana vola
Orinasa manana tantara lava, renivola lehibe, fahazoan-dàlana ary hevitra tsara maro Vao haingana no namoronana ny orinasa, tsy fantatra ny fiaviana sy ny haben'ny renivohitra nahazoana alalana, ny fahazoan-dàlana tsy navoaka, ny fanehoan-kevitry ny mpanjifa dia ratsy na tsara ny fanehoan-kevitra fa voasoratra toy ny "kopia karbona" ​​izy ireo.
Fantaro bebe kokoa!
Fisoratana anarana haingana
AvaTrade dia ampahany amin'ny lisitry ny sehatra ara-barotra sosialy tsara indrindra satria manolotra sehatra ara-barotra ara-tsosialy mivantana sy ankolaka maro ho an'ny mpivarotra.
AvaTrade dia niara-niasa tamin'ny sasany amin'ireo mpamatsy famantarana tsara indrindra eran'izao tontolo izao mba hahazoana antoka fa afaka manaraka ireo mpivarotra tsara indrindra na aiza na aiza misy azy ireo mpivarotra.
Izy ireo koa dia manolotra varotra mivantana amin'ny sehatra ara-barotra intuitive amin'ny fitaovana ara-barotra 250 isan-karazany ao anatin'izany ny forex, CFD ary cryptocurrencies.
Ny sehatra ara-barotra sosialy AvaTrade dia ahitana:
Mirror Trader - Ankafizo ny varotra manual, semi-automatique na mandeha ho azy amin'ny fanarahana ireo mpamatsy famantarana tianao. Azonao atao koa ny mandika tetika ara-barotra algorithmika novolavolain'ireo mpivarotra za-draharaha miaraka amin'ireo mpamorona lehibe.
ZuluTrade - Misafidiana avy amin'ny mpamatsy famantarana marobe, milahatra amin'ny alàlan'ny masontsivana azo ampiharina isan-karazany, ao anatin'izany ny fihenan'ny ambony indrindra sy ny tombom-barotra antonony.
AvaTrade dia iray amin'ireo mpanelanelana an-tserasera lehibe indrindra eran-tany amin'ny resaka volan'ny varotra. Izy ireo dia voafehin'ny fanjakana 6 mahavariana ao anatin'izany i Eropa, Aostralia ary Afrika Atsimo. Manodidina ny kaontinanta 5 ny fahazoan-dàlana mifehy azy. Izany dia miantoka fa afaka manao varotra azo antoka sy azo antoka ianao amin'ny tontolo ara-barotra feno omeny.
AvaTrade dia manolotra sehatra ara-barotra ara-tsosialy isan-karazany miaraka amin'ny sara mifaninana, fotodrafitrasa ara-barotra mitarika indostria ary fanohanana mpanjifa tsara.
Noho ireo antony ireo sy ny maro hafa dia lasa sehatra ara-barotra ara-tsosialy tsara indrindra izy ireo.
Maherin'ny 250 fitaovana ara-barotra
Sehatra ara-barotra sosialy marobe
Fitaovana ara-barotra maimaim-poana sy famantarana
Fitsipika amin'ny jurisdiction 6
fanohanana mpanjifa tsara
Fametrahana farafahakeliny $100
Ny mpivarotra Forex rehetra dia mila manombana ireto anton-javatra manaraka ireto:
Paramètre varotra: Tokony hisy fananana marobe azo isafidianana, miaraka amin'ny daty lany daty maro samihafa azo isafidianana. Tokony hisy fitaovana roa farafahakeliny azo isafidianana, na dia maro aza ny brokers manolotra mihoatra noho izany.
Fiteny amin'ny sehatra: Isto será mais important do que alguns do que outros. Todas as plataformas são fornecidas em inglês, mas as opções linguísticas adicionais podem variar muito. Hamarino amin'ny tranokalan'ny 'tranokala' fa tsy azo atao ny manoratra any an-toerana.
Fametrahana kely indrindra: Qual é o custo para começar a negociar? Os corretores não cobram taxas por negociação, pelo que todos os fundos depositados podem ser utilizados para negociar. O depósito mínimo médio é entre $ 10 e $ 300. Qualquer montante que exceda isto é considerado acima da média.
Safidy banky: ny fomba banky tiana atolotra? Ity fanontaniana ity dia tokony hovaliana amin'ny fiandohan'ny fizotran'ny fanombanana, satria raha tsy izany dia tsy maintsy mitady broker hafa ianao.
Bonus sy fampiroboroboana: Mahazo tombony hatramin'ny 100% no atolotry ny broker sasany. Ireo dia ho avy miaraka amin'ny fepetra tsy maintsy fenoina alohan'ny fisintahana. Na izany aza, ny bonus sy ny fampiroboroboana hafa dia afaka manome tombom-barotra tsara ho an'ny kaonty.
Fanohanana ny mpanjifa: Um gestor de conta dedicado pode ou não ser fornecido, mas todos os trader devem ter acesso a apoio ao cliente. Araka ny fiheverana azy ireo dia tsy maintsy hofongaranao ireo daty ireo ary ho toy ny vanim-potoana ivoahana ho toy izany koa ny lozisialy.
ny safidin'ny mpanakalo misy dia ahitana orinasa vaovao sy efa niorina. Maro no voafehy, fa ny sasany tsy afaka noho ny toerana misy azy.
Zava-misy voaporofo fa ireo izay miara-miasa amin'ny broker lehibe dia mazàna mahazo vola be indrindra ary miaina olana vitsy indrindra.
Na dia mety ho faly amin'ny fanombohana aza ianao, dia misy tombony maro ny fakana fotoana hisafidianana ny tsara indrindra. broker ny Forex.
Inona ny tsena Forex?
Ity dia tsenan'ny fifanakalozana vahiny izay mampivondrona ny asa ara-bola ataon'ny banky sy ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra. Ny rafitra ara-toekarena lehibe indrindra eran-tany dia azon'ny rehetra atao.
Ahoana no hanombohana varotra amin'ny Forex?
Satria tsy afaka ho lasa mpandray anjara amin'ny tsena ny olona iray, mila misoratra anarana amin'ny broker Forex ny mpivarotra iray. Ny broker dia manome ny mpivarotra terminal ara-barotra, fitaovana ara-barotra ary ny fahafahana ara-barotra Forex rehetra.
Misy safidy fidiram-bola Forex passive ve?
Eny. Ny mpivarotra dia afaka mampiasa vola amin'ny risika kely indrindra amin'ny kaonty PAMM/LAMM, izay tantanin'ny mpilalao tsena matihanina. Misy endri-javatra hafa toy ny fitantanana fitokisana sy serivisy varotra kopia.
Ahoana ny fiarovana ny tsena Forex?
Satria ny varotra dia atao araka ny karazana margin, misy foana ny risika ary amin'ny voalohany dia avo be. Saingy ny brokers dia manolotra fahafahana mahomby maromaro ho an'ny fampitomboana ny risika, ohatra ny portfolio PAMM. Ary koa, ny vola fanonerana maika.
Lahatsoratra momba ny Cryptocurrency
Raiso ny gazety
Ireo brokers voatanisa ao amin'ny tranokala dia nandalo fikarohana sy fanadihadiana lalina.
Ny tanjonay dia ny hanome hevitra tsy mitongilana momba ny mpivarotra varotra an-tserasera mba hanomezana ny mpivarotra ny fahatakarana mazava momba ireo brokers samihafa misy. Ny mpivarotra dia afaka mampiasa ny serivisy maimaim-poana, saingy tokony hanao ny fahazotoan'izy ireo manokana izy ireo ary handray fanapahan-kevitra manokana rehefa misafidy broker ara-barotra an-tserasera mifanaraka amin'ny filany manokana.
Na dia nohamarinin'ireo brokers mivantana aza ny ankamaroan'ny angonay, dia mety hiovaova izany indraindray. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fampahalalana diso na lany andro amin'ny fanadihadian'ireo mpivarotra varotra an-tserasera izahay ary tsy maintsy manamarina mivantana ny angon-drakitra rehetra miaraka amin'ny broker ianao. Ny sarany, ny fepetra, ny vokatra ary ny serivisy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia mety hiova tsy misy fampandrenesana.
Fialana andraikitra amin'ny andraikitra
Forexdigital.net dia natao ho an'ny fampahafantarana ihany ary tsy natao hizarana na hampiasain'ny olona any amin'ny firenena na faritra iray izay mifanohitra amin'ny lalàna na fitsipika eo an-toerana ny fizarana na fampiasana izany. Ity tranonkala ity dia tsy manome toro-hevitra momba ny fampiasam-bola, ary tsy tolotra na fangatahana amin'ny karazana fividianana na fivarotana vokatra fampiasam-bola. Mety hahazo onitra isika amin'ny alàlan'ny mpanao dokam-barotra ankolafy fahatelo. Ity fanonerana ity dia tsy tokony hoheverina ho fanohanana na tolo-kevitra avy amin'ny forexdigital.net, ary tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny salan'ny broker.
Ny CFD, Forex, Cryptocurrencies ary fitaovana ara-bola hafa dia mety ho very haingana noho ny fampiasam-bola. Ny mpamatsy rehetra dia manana isan-jaton'ny kaonty mpampiasa vola antsinjarany izay very vola rehefa mivarotra CFD sy fitaovana ara-bola hafa amin'ny orinasany. Tokony handinika ianao raha azonao ny fomba fiasan'ny CFD, Forex, Cryptocurrencies ary mety ho very ny volanao ianao. Aza mampiasa vola mihitsy izay tsy ho azonao.
Copyright © 2022 — Forexdigital.net Zo rehetra voatokana.
TEhirizo SY HANAIKY